တရုတ် WPC Cabinet ပရိဘောဂဘုတ်လိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Jiahao
သစ်သား-ပလပ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့သည် အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်၊ သာမိုပလတ်စတစ်ပေါ်လီမာပစ္စည်းများ (ပလပ်စတစ်) နှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီများ စသည်တို့ကို တစ်ပုံစံတည်း ရောနှောကာ မှိုစက်ဖြင့် အပူပေးပြီး ထုတ်ယူသည်။သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လက္ခဏာများပါရှိသော အလှဆင်ပစ္စည်းများသည် သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်ကို အစားထိုးနိုင်သော နည်းပညာမြင့်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတရှိသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအသစ်ဖြစ်သည်။
PVC / WPC တံခါး panel ၏အားသာချက်များ
1. ရေစိုခံခြင်း- ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊
2. ပတ်ဝန်ကျင်ကာကွယ်မှု- အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော အရာများ၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုဗေဒ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ၊ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်၊ ဘန်ဇင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အရာများ မထွက်ရှိစေဘဲ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ 100% ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသာမက ဇီဝရုပ်ကြွင်းများကိုပါ ဖျက်နိုင်စေပါသည်။
3. မီးဘေးကာကွယ်ရေး- မီးခံနိုင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် B1 ဖြစ်ပြီး မီးဘေးကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များ မြင့်မားသည့်အချိန်များတွင် သင့်လျော်သော ကျောက်တုံးများထက် ဒုတိယသာရှိသည်။
4. မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ဝတ်ဆင်ခုခံ: ပိုရှည်ဝန်ဆောင်မှုဘဝ;
5. ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးခံစားခွင့်- ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊
6. အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာပြင် ကုသမှုများ- ဘုတ်၏ မျက်နှာပြင်ကို မတူညီသော ပုံစံများ ပြုလုပ်ရန် ကွဲပြားသော ရုပ်ရှင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ရုံသာမက ကွဲပြားသော ပုံစံများဖြင့် ထွင်းထုနိုင်သည်။
7. ပိုမိုတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်- ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
PVC / WPC တံခါးဘောင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း မိတ်ဆက်
PVC / WPC တံခါး panel ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် PVC / WPC တံခါး panel ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် conical twin-screw extruder၊ မှို၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဖြတ်တောက်သည့်စက်စသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။ Sjsz စီးရီး PVC တံခါးဘောင် extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော ချိန်ညှိမှုအကွာအဝေး၊ မြင့်မားသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှု၊ အဆင်ပြေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။
PVC reson၊ CaCO3၊foaming additives များ၊additives တွေ ဝယ်တယ်။
PVC/WPCဒြပ်ပေါင်း → ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း→ ထုတ်ကုန်
(ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည်)
စံအရွယ်အစား (အလျား x အနံ): 2440mm x 1220mm
အထူ- 5mm၊ 8mm၊ 12mm၊ 15mm၊ 18mm၊ 20mm၊ 25mm
ယခင်- SPC ကြမ်းခင်းစာရွက်/Wall Decoration Sheet Extrusion Line
နောက်တစ်ခု: LVT ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (Online Lamination)
Wpc Foam Board Extrusion စက်
Wpc Foam Sheet လိုင်း
Wpc Foam Sheet Line Extrusion စက်
Wpc Profiles လိုင်း